Ogaden News Agency (ONA) – Dagaaladii ugu dambeeyay ee CWXO ay ku qaadeen ciidamada gumaysiga Itobiya
Wararka naga soo gaadhaya Xarunta Dhexe ee JWXO iyo guud ahaan dalka Ogaadeeniya ee Itobiya gumaysato ayaa sheegaya dagaalo dhawr ah oo ka dhacay deegaano kamid ah Ogaadeeniya.
Dagalada ka socda Ogaadeeiya oo ah kuwo saacad walba dhacaya ayaa ujeedadoodu tahay sidii gumaysiga Itobiya looga xorayn lahaa gabi ahaan ciida Ogaadeeniya. Dagaalada aan helnay warbixintooda ayaa u dhacay sidan;
– 06/05/2013 Weerar mir ah oo lagu qaaday saldhig milatari oo ay ciidamada maxaysatahada gumaysiga Ehiopia ka daganaayeen Tuulada Garasley oo katirsan Dhuxun ayaa waxaa askarta gumaysiga Itobiya lagaga dilay weerarkaas mirta ah 5 Askari waxaana lagaga dhaawacay 7 kale.
– 17/05/2013 kamiin ay ka xidheen Cutub katirsan Nh/CWXO duleedka Wayla oo Fiiq u dhow ayaa waxaa soo galay askar lug ah oo kuwa gumaysiga Itobiya ah waxaana kamiin kaasi lagaga dilay 3 Askari.
– 18/05/2013 dagaal ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Dhaban-hadi oo Xamor katirsan ayaa waxaa askarta gumaysiga Itobiya lagaga dilay 1 Askari waxaana lagaga dhaawacay 2 kale.
– 10/05/2013 Ina mana-gade oo Dhagaxbuur katirsan waxaa lagu dilay 1 Askari waxaana lagu dhaawacay 1 kale.
– 07,08 iyo 09kii Bishani shanaad 2013 dagaalo kakala dhacay Jinoole iyo Caado ayaa waxaa askarta gumaysiga Itobiya lagaga dialy 6 Askari waxaana lagaga dhaawacay 6 kale.
Waxaa iyaguna jira dagaalo kale oo kakala dhacay 06,14,13 iyo 20/5 Deegaanada kala ah Ananu, Kaaraa-gobo, Qudhac-raamaale,Dacar,Tunbuur,Rabrabta iyo Kudunbuur waxaana dhagaaladaas askarta gumaysiga Itobiya lagu gaadhsiiyey khasaare balaadhan.